IGoogle ixhasa onjiniyela ababili beLinux ukugxila kwezokuphepha | Kusuka kuLinux
IGoogle ixhasa onjiniyela ababili beLinux ukugxila kwezokuphepha
IGoogle neLinux Foundation umemezele izinhlelo zoku xhasa abagcini besikhathi esigcwele ababili abazogxila kuphela ekwakhiweni kwe- Ukuphepha kwe-linux kernel.
UGustavo Silva noNathan Chancellor, bobabili abanikelayo kuLinux, bazosebenza ukuqinisa ukugcinwa kanye nokwenza ngcono ukuphepha kwe-kernel nezinhlelo ezihlobene nazo ukuqinisekisa ukusebenza kwephrojekthi yesoftware yamahhala ithandwa kakhulu emhlabeni kubasebenzisi amashumi eminyaka ezayo.
Inhloso ukwenza ini uhlelo olusebenza kuyo yonke indawo luhlala isikhathi esidenjengoba ucwaningo lukhombisa ukuthi kunesidingo sokwenza ngcono ukuphepha kwesoftware yomthombo ovulekile, ikakhulukazi kwiLinux.
Umbiko kusuka ku-Linux Foundation Open Source Security Foundation (OpenSSF) kanye neHarvard University Innovation Science Laboratory (LISH) ithole ukungabi bikho kwemizamo yokuphepha kwisoftware yomthombo ovulekile.
I-Free and Open Source Software (FOSS) isibe yingxenye ebalulekile yomnotho wanamuhla. Isoftware yamahhala ilinganiselwa ukuthi ingamaphesenti angama-80 kuye kwangama-90 wayo yonke isoftware yesimanje, futhi isoftware iyinsiza ebaluleke ngokwengeziwe cishe kuyo yonke imboni, ngokusho kweLinux Foundation.
Ukuqondisisa ukwenza ngcono isimo sokuvikeleka nokusimama kohlelo lwesoftware lomthombo ovulekile futhi ovulekile nokuthi kanjani izinhlangano nezinkampani ingayisekela, i-OpenSSF ne-LISH babambisene ukwenza ucwaningo olunzulu yabanikeli kulolu hlobo lwesoftware njengengxenye yomzamo omkhulu wokuthola indlela yokuvikela ukuqinisa ukuphepha kwe-cyber ngokuqinisa ukuphepha kwesoftware yamahhala.
Izinhloso yalolu cwaningo babe qonda isimo sokuphepha nokusimama kwesoftware yomthombo ovulekile futhi sikhombe amathuba okuyithuthukisa futhi siqinisekise ukusebenza kwesoftware yomthombo ovulekile ngokuzayo. Imiphumela ikhombe izizathu zokuba nethemba ngekusasa lesoftware yomthombo ovulekile.
"Ukuphepha kokuthengwa kwempahla nokuvikeleka kwesoftware yomthombo obalulekile kubalulekile," kusho uDan Lorenc, unjiniyela wesoftware yakwaGoogle. "Sizama ukukhuluma ngayo manje futhi sikhombise abantu ukuthi sikwenza kanjani, ukuze bakhuthazwe futhi bagqugquzeleke futhi bathole ezinye izindlela zokusisiza nathi."
U-Lorenc ubona izinto ezimbili ezibalulekile maqondana nokuphepha kwesoftware yomthombo ovulekile. Elokuqala iqiniso ukuthi livela kubantu emhlabeni wonke, abanye babo okungenzeka banonya noma banezinhloso ezimbi, inkinga yezokuphepha etholakala kwisoftware yomthombo ovulekile. Okunye iqiniso ukuthi yi-software futhi yonke isoftware inamaphutha, ngamabomu noma cha, adinga ukulungiswa.
"Ukuthi ikhodi akuyona eyakho akusho ukuthi azikho izimbungulu," kusho uLorenc. "Kungumbono oyiphutha izinkampani eziningi eziqala ukuwubona." Lezi zinto ezimbili, kuhlangene nenani elikhulayo labantu abasebenzisa isoftware yomthombo ovulekile, benza ezokuphepha zize kuqala. "Sihloniphekile ukweseka imizamo kaGustavo Silva noNathan Chancellor emsebenzini wabo wokuqinisa ukuphepha kwe-Linux kernel," engeza.
Shansela, omunye wabathuthukisi ababili abathatha le ndima, ubesebenza ku-kernel ye-Linux iminyaka emine nohhafu. Eminyakeni emibili edlule, waqala ukufaka isandla enguqulweni enkulu yeLinux njengengxenye yephrojekthi yeClangBuiltLinux, isinyathelo sokwakha i-Linux kernel ngamathuluzi wokwakha weClang neLLVM.
Izogxila ekuhlukaniseni nasekuqondiseni noma iziphi izimbungulu ezitholakale nabahlanganisi beClang / LLVM ngenkathi sisebenzela ukusungula izinhlelo eziqhubekayo zokuhlanganisa ukuxhasa lo msebenzi ngokuzayo. Ngalezo zinhloso zikhona, uhlela ukuqala ukungeza ukusebenza nokulungisa i-kernel usebenzisa lobu buchwepheshe bokwakha.
Chancellor lindela ukuthi abantu abaningi baqale ukusebenzisa iphrojekthi ingqalasizinda yomhlanganisi LLVM futhi unikele kokugcina nokulungiswa kwe-kernel, ngoba "kuzosiza kakhulu ekwenzeni ngcono ukuphepha kwe-Linux kwawo wonke umuntu," esho esitatimendeni.
USilva waqala ukusebenza ku-kernel njengengxenye yeCentral Infrastructure Initiative yeLinux Foundation, uhlelo lapho abathuthukisi abancane beqeqeshwa ngonjiniyela abasebenza ku-kernel.
Njengamanje, umsebenzi wakhe wokuphepha wesikhathi esigcwele ugxile ekususeni izigaba ezahlukahlukene zokuchichima kwesibhaxana. Iphinde isebenze ekulungiseni ukuba sengozini ngaphambi kokuba ifike emgqeni omkhulu futhi ithuthukise izindlela zokuzivikela eziqeda amakilasi wonke okuba sengozini. USilva ukhiphe i-kernel patch yakhe yokuqala e-2010 futhi ubelokhu ekuthuthukiseni ama-kernel aphezulu amahlanu kusukela ku-2017.
"Sisebenzela ukwakha umnyombo osezingeni eliphezulu onokwethenjelwa, oqinile, futhi omelana nokuhlaselwa ngaso sonke isikhathi," kusho uSilva. "Ngale mizamo, sinethemba lokuthi abantu, ikakhulukazi abanakekeli, bazokubona ukubaluleka kokwamukela izinguquko ezizokwenza ukuthi ikhodi yabo ingathambeki emaphutheni ajwayelekile."
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » IGoogle ixhasa onjiniyela ababili beLinux ukugxila kwezokuphepha
ICodeCarbon, ithuluzi lomthombo ovulekile elilandelela ukungcoliswa okwenziwe ngocwaningo lokufunda ngomshini
I-Australia igunyaza entsha ezophoqelela iGoogle neFacebook ukuthi bakhokhele izindaba